Tokony ho fantatsika tsara ny andraikitsika ary tokony hanohy amim-pinoana isika rehefa miantehitra amin’ilay herin’ny Sorompanavotana izay mampahery, mampatanjaka sy manome fahafahana hanao zavatra ary manasitrana.
Naniry ny hahafantatra bebe kokoa mikasika an’ireo vehivavy izay nanompo talohako taorian’ny niantsoana ahy ho ao amin’ny fiadidian’ny Fikambanana Ifanampiana maneran-tany aho. Variana tamin’ny fampianarana nomen-drahavavy Zina D. Young aho, izay mpanolotsaina voalohany tao amin’ny fiadidian’ny Fikambanana Ifanampiana maneran-tany faharoa. Hoy izy hoe: “Ry rahavavy, tokony hahafantatra tsara ny andraikitsika isika.”1 Nisaintsaina mikasika ny teny hoe misaintsaina tsara syandraikitra aho ary nanao fikarohana fanampiny tao amin’ny soratra masina.
Nampianatra an’ireo Olomasina tamin’ny androny i Paoly ao amin’ny Testamenta Vaovao manao hoe:
“Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky. …
“Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa ny andro: koa aoka … hitafiantsika ny fiadian’ny mazava.”2
Nampianatra ny vahoaka mikasika ireo andraikitra masin’ireo izay miditra manao fanekempihavanana amin’Andriamanitra i Almà ao amin’ny Bokin’i Môrmôna:
“Ary ankehitriny, satria maniry ianareo ny ho tonga ao amin’ny valan’Andriamanitra sy hantsoina hoe vahoakany ary te-hifampitondra ny enta-mavesatry ny tsirairay mba hanamaivana izany;
“Eny ary te-hiara-malahelo amin’izay malahelo; eny, ary hampionona ireo izay mila fampiononana sy hijoro ho vavolombelon’Andriamanitra amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny zava-drehetra, ary amin’ny toerana rehetra. …
“Ankehitriny, lazaiko aminareo, raha izany no fanirian’ny fonareo, inona no misakana ny tsy anaovana batisa anareo amin’ny anaran’ny Tompo ho vavolombelona eo anoloany fa efa nanao fanekempihavanana Taminy ianareo, fa hanompo Azy sy hitandrina ny didiny mba hahazoany mampidina bebe kokoa ny Fanahiny aminareo?
“Ary ankehitriny nony efa nandre izany teny izany ny vahoaka dia niteha-tànana noho ny fifaliana ary niantso hoe: Izany no fanirian’ny fonay.”3
Nahatonga ahy hieritreritra mikasika ireo “andraikitra” izay tokony ho fantatsika tsara amin’izao androntsika izao ny fanambarana nataon-drahavavy Young sy ireo soratra masina ireo.
Rehefa atao batisa isika dia miditra ao amin’ny fanekempihavanana iray. Nampianatra ny Loholona Robert D. Hales hoe: “Rehefa manao fanekempihavanana sy mitandrina izany isika dia miala amin’izao tontolo izao ary miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra.”4
Miova isika. Lasa olona hafa ary manao zavatra amin’ny fomba hafa isika. Lasa hafa ny zavatra henointsika sy vakiantsika ary lazaintsika, ary hafa ny zavatra hanaovantsika satria lasa zanakavavin’Andriamanitra isika izay voafatotra Aminy amin’ny alalan’ny fanekempihavanana.
Mandray ny fanomezana ny Fanahy Masina isika rehefa raisina ho mpikambana, izany hoe manana zo hanana ny fitarihana tsy tapaka avy amin’ilay mpikambana iray ao amin’Ny Andriamanitra mba hitarika antsika sy hankahery antsika ary hiaro antsika. Mampitandrina antsika Izy rehefa alaim-panahy hanalavitra an’ireo fanekempihavanantsika isika ary hiverina any amin’izao tontolo izao. Nampianatra ny Filoha Boyd K. Packer fa tsy misy na iza na iza amintsika “hanao fahadisoana tena lehibe ka hoe tsy nahazo fampitandremana mialoha tamin’ny alalan’ny bitsiky ny Fanahy Masina.”5
Mba hahazoana izany fanomezana izany sy mba hananana ny Fanahy miaraka amintsika dia tsy maintsy mendrika isika sy malina eo amin’ny fanaraha-maso ny toe-pontsika. Moa ve malefaka ny fontsika? Manana fo feno fanetren-tena sy manaiky ampianarina ary feno fitiavana ve isika? Sa ve ilay fontsika lasa nihamafy tsikelikely rehefa navelantsika hanembantsembana antsika amin’ireo bitsika izay azo antoka fa avy amin’ny Fanahy ny sofintsika ireo tabataba maron’izao tontolo izao?
Lasa miova sy mahafantatra tsara an’Andriamanitra ny fontsika rehefa atao batisa isika. Eto amin’ilay diantsika eto an-tany dia mila manontany tsy tapaka ny tenantsika hoe: “Raha efa nandalo fiovam-po [aho], … tsapa[ko] ve izany ankehitriny?”6 Ary raha mbola tsy tsapako izany dia maninona moa raha miezaka ny mahatsapa izany aho?
Maro tamin’ireo Olomasina tany am-piandohana no “nahatsapa fiovana mahery vaika tao am-po[ny].”7 Nanomana azy ireo handray ireo fitahian’ny tempoly mba hampatanjaka azy ireo eo amin’ny andraikiny izany. Ireo Olomasina fahiny tany Nauvoo dia nandeha “tany amin’ny tempoly andro aman’alina”8 mba handray ireo ôrdôna